Kenya :Khasaaraha ka dhashay Qarax loo adeegsaday bamboo-gacmeed lala beegsaday Kiniisad ku taal Nairobi | Berberanews.com
Home WARARKA Kenya :Khasaaraha ka dhashay Qarax loo adeegsaday bamboo-gacmeed lala beegsaday Kiniisad ku...
Kenya :Khasaaraha ka dhashay Qarax loo adeegsaday bamboo-gacmeed lala beegsaday Kiniisad ku taal Nairobi
Kenya-(Berberanews) — Ciidammada Booliska Kenya, ayaa xaqiijiyay dhimashada hal ruux iyo dhaawaca 15, ka dib qarax bambo-gacmeeda oo maanta lala beegsaday kiniisad ku taal badhtamaha magaalada Nairobi.
Joseph Gichangi, oo ka mid ah saraakiisha bileyska waxa uu sheegay in qofka qaraxa fuliyay uu soo dhex raacay dad ku cibaadaysayayay, si deg degana u baxsaday markii uu fuliyay qaraxaas. Waxaannu intaas raaciyay in cisbitaalka lagu dawaynayo dadkii dhaawacyadu soo gaadheen oo qaar ka mid ah xaaladoodu culustahay.
“Hal qof ayaa dhintay, toban qof oo kalena way ku dhaawacmeen,” ayuu yiri afhayeenka booliiska Kenya, Eric Kiraithe, iyagoo sheegay in kuwii weerarka ka dambeeyay ay baxsadeen.
Ma jirto cid sheegatay mas’uuliyadda tahay weerarkaas, iyadoo saraakiisha Kenyan ay sheegeen in weerarkan uu jawaab u yahay faragelinta ay ciidamada Kenya ku sameysay dalka Soomaaliya bishii Oktoobar ee sannadkii hore.
Waxay ahayd bishii aynu soo dhaafnay ee March markii bambooyin lagu weeraray goob basaska laga raaco oo ku taalla badhtamaha Nairobi oo ay ku dhinteen lix qof, iyadoo ay dhaawacyo kasoo gaadheen 60-qof oo ka mid ahaa dadkii basaska sugayay. Kaasoo ay masuulliyaddiisa sheegatay kooxda Al-shabaab.
Previous articleXukuumadda oo sas ka qaadday Safar Ibraahin-Dhaga-weyne ku tagay Berbera iyo Ciidammo Dheeraad ah oo la geeyey magaalada
Next articleVideo:Maareeyaha Dekedda Berbera oo sheegay inuu boqolkiiba konton u kordhiyay mushaharka shaqaalaha